2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Makemikari Abstracts Services) Registry Number 22536-61-4
Chirapa > 2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Makemikari Abstracts Services) Registry Number 22536-61-4
08 / 18 / 2018Posted by: APICMOCategory: Chirapa0 zvaanofarira
Zvisikwa zveMuviri uye zveChikemu zve 2-Chloro-5-methylpyrimidine
2- Chloro-5 methylpyrimidine ine chiedza chakachena chekrisstalline pfumbu inoratidzika pane firiji. Vamwe vanogona kutsanangura mumvuri wemavara se-off-white. Haina kunhuhwirira uye inorema masendimita 128.56 per mole. Kira chemakemikari yaro inozivikanwa seC5H5CIN2 uye Yakasimbiswa Molecular - Input line In Entry System (SMILES) seCC1 = CN = C (CL) N = C1. Iyo mhizha ine chando chinoputika chiri pakati pe 89-92 digresenti centigrade, uye nendiro yekubikira ye239 .2 madigiri pa 750mm / hg. Iyo yakasimba inogadzikana zvishoma mumvura. Iyo inowanzogadzirwa uye inotengeswa semushonga wemishonga uri pakati nepakati yepayipi yechirwere (kuchena) pakati pe97% ne98%, iyo yakaderera yakataurwa se95%. Kuwanda kweiyo imwe mole ye2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) inenge 1.169 gramu pamusi mumwe pa 25 digiti centigrade. Enthalpy ye vaporoise ndeye 45.68 KJ / mol uye mhepo inoputika inoyerera paanenge 0.0626 mmHg pa 25 digiri Celsius. Shanduro dzakafanana dzinoshandiswa nokuda kwe2-chloro-5-methylprimidine dzinonzi: Pyrimidine, 2-Chloro-5-methylpyrimidine, 2- chloro-5-methyl- (8Cl, 9Cl) uye 5-methyl-2- chloropyrimidine.
Kugadzirira kwe2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4)
2- chloro-5 methylpyrimidine inogona kushandiswa nenzira dzinoverengeka. Muitiro wakajairika wekugadzirira wakanga uri kuuwana se 25% yemugove unoguma nekusangana pakati phosphorus oxychloride uye 3-methylpyridine 1-oxide. Zvisinei, kuwana chibereko chakareba, 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) inogona kugadzirwa nekuita phosphorus oxychloride ne 3-methylpyridine 1 - Oxyde. Kuvandudzwa kunosanganisira kuita zvinoparidzirwa ne-organic organic nitrogen iripo uye ine diluent (zvichida inerous organic solvent) zvose zvakaitwa mukati mehutsi hwakakura pakati -50 degrees uye + 50 degrees Celsius. Zvibereko zvehupamhi kusvika ku70% zvinogona kuwanikwa nenzira dzakasiyana. Zvinyorwa zvezvinyorwa zvepamusoro pe96% zvakanyorwa zvakare, kunyange izvi zvisingabatsiri zvichiratidzwa zvishoma zvakaoma kudarika, zvichiita kuurayiwa, kunyanya pamwero mukuru zvisingabviri. Sarudzo yekugadzirisa nzira yakasarudzwa inogona kuchinjwa nehuwandu hunoda kubudisa nekudzivisa kuparadzana kubva kune imwe nezvibereko. Kunyange zvakadaro, zvichienderana nekushandiswa kwako kwechigadzirwa, iwe unogona kugara uchiwana nzira inoshandiswa mukugadzirira, kana kusarudza nzira yakakodzera yaungada kushandisa kana iwe uri kuita kugadzirira iwe pachako.
Ndeipi chaizvo Pyramidine?
Zvichinyatsojeka, zvinonhuwira zvinokonzerwa neCarbon uye Nitrogen maatomu mune imwe mhete yakakoswa. Rin'i racho rakanyatsogadzikana. Zvigadzirwa zvePyramidine, zvine kwenguva yakareba iko zvino zvakakosha basa rinokosha mukugadzirwa kwezvinodhaka ivo pachavo kana mukubatana nedzimwe mishonga. Ive yakashandiswa, uye inoramba ichishandiswa mune zvakasiyana-siyana zvemishonga inosanganisira, asi isingatarisirwi, mishonga yekurapa kuwedzerwa kweropa, anti-epilepsy medication, general anesthetics, anti-malaria zvinodhaka uye kunyange muhutachiwana hweHIV Mishonga . Chirongwa chedu munyaya ino chiri pa 2-chloro-5 methylpyramidine uye kushandiswa kwayo sepakati
Zvishandiso uye kushandiswa kwe 2- Chloro-5- methylpyramidine
Iko inowanzoshandiswa mune zvakagadzirwa zvehupenyu; inowanzoshandiswa se pesticide iri pakati peyakadai seyaketetamiprid, imidacloprid, searbicide uye bactericide. Inoshandiswawo semishonga inoshandiswa kwemishonga, chinokonzera mhepo uye petrochemical additive. 2- Chloro-5- methylpyramidine yakashandiswa mukugadzirwa kwemishonga yeononicotinoid ine mishonga ine utachiona. Zvimwe zvinoshandiswa muAgro michina synthesis zvinosanganisira kugadzirwa kwe: Imidacloprid, Acetamiprid, Nitenpyram, NTN32693. Izvi zvakaratidza kubudirira mune zvese zvekugara uye zvemabhizimisi kuti zviparadze zvipembenene zvinokuvadza kune michero, yemiriwo kana zviyo zvezviyo.
Mimwe makemikari mapiritsi ayo 2-Chloro-5 methylpyramidine inogona kushandiswa kuita inosanganisira:
Kuchengetedza uye Kutakura
2-Chloro-5 methylpyramidine inozivikanwa kuva yakasimba mumakemikari kana ichichengetedzwa pasi pemamiriro ekurudzirwa: Pachishambirwo chemukati. Usaedza kushandisa aluminium kana mabhanji, sezvinongoita chidimbu ichi chizoita neizvi kuti ibudise hydrogen gasi iyo inogona kugadzirisa kusanganiswa nemhepo. Iva nechokwadi chekuti chengetedza zvigadzirwa nguva dzose kuti uone uye uchitarise chero upi noupi kana uchinge uchinge wapera.
Pamusana pokusimba kwayo uye isiri ngozi, 2- chloro-5- methylpyramidine inogona kutakurwa nemhepo kana gungwa. Inonyanya kushandiswa ne hydrogen oxides, carbon oxides, uye nitrogen oxidhi, saka inorayirwa kusarudza kutakura kana kusarudzwa kwekusarura pasina kuzarurirwa kune chero ipi zvayo. Zvigadziri zvinofanira kuchengetedzwa zvakavharwa, munzvimbo inotonhora yakaoma uye yakanaka
Kugadzirisa Zvakakodzera, Kuchengeteka Kuchengetedzwa, Kurasikirwa uye Kurwisana Nemoto
Nguva dzose dzipfeke mageti anodzivirira akadai semakemikari asingagadziri magasi uye kuchengetedzwa kwemagetsi kana uchibata 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) kudzivisa kusangana nemaziso kana ganda. Dzivisa kuvhiringidza mhute, vaporo kana gesi: Nguva dzose uishandise munzvimbo yakanyatsokonzerwa nemhepo. Kuenderera mberi kwekuputika kwakaratidzwa kuva nehutano husina kunaka. Sezvo nguva dzose, edza kuita tsika dzakanaka dzehutsanana uye kuchengeteka.
Kunyange zvakadaro, Mukana wekukurumidza kumedza: Sungura muromo nemvura uye sangana nechiremba. Muchiitiko chekudzivirira: Simbura munhu akabatwa mumhepo itsva uye kana vasingapfuuri, rambai muchiita kupemha kwemajoka, uye bvunza chiremba. Nokuda kwepachivara rweganda, shambidza nzvimbo yakakanganiswa zvakakwana nesipo nemvura kwechinguva chemaminitsi gumi nemashanu uye kubvisa chero zvipfeko zvakasvibiswa kana shangu. 2- chloro-5- methylpyrimidine inogona kupisa ganda kana kukonzera kunzwisisika. Ramba uchitaura nechiremba.
2- chloro-5- methyl pyrimidine inofanira kuraswa semarara. Izvi zvinoreva kuti urongwa hwakakosha hunofanira kuiswa panzvimbo, uchishandisa kambani yekurasikirwa kwekambani inobatana neunharaunda yako yemunharaunda yekurasa tsvina kuti uone kuti kutevedza mitemo yese yenyika uye yenharaunda. Iyo kemikari haifaniri kusunungurwa mumidhaini, uye kana iine jecha rinopera, vermiculite muvhara rakanyungudutswa uye inotora zvakakodzera.
Kuchenesa moto semugumisiro we2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) kupisa kunogona kushandisa mashizha omoto emakemikari akaoma, Carbon (IV) oxide, mutezo wemapurisa kana zvinodzimwa zvinodhaka zvinodhaka. Kana zvichidiwa, munhu anofanira kupfeka zvipfeko zvekudzivirira moto nemichina yekufema kuti ape dambudziko rekupisa.
Maererano nehuwandu hwekushanda kwemazuva ano, 2- chloro-5-methylpyramid haina mhedziso yakadaro yakaiswa. Gadziriro yekuchengetedza yakadai semakemikari fume hoods kune injini inorumbidzwa panguva yekubata.
pashure Previous mumhanyi; Alex Rodriges
Next Next mumhanyi; Zvose zvaunoda kuziva pamusoro pe spiro mazana